बलात्कारमा सम्झौता गर्छन्,के गर्ने ?
काठमाडौं । बलात्कार भयो भन्छन्, प्रहरी हर्कतमा पनि आउँछ तर पीडितले पीडकसँग सम्झौता गरिदिदा पीडकमाथि कारवाही गर्नै सकिन्न । काठमाडौं प्रहरी प्रमुख विश्वराज पोखरेलको यो अभिव्यक्ति कति मर्मस्पर्सी छ ?
राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्नु जरुरी छ, अवस्था खस्कदो छ । दिनदिनै हत्या बलात्कार, अपहरण, बेश्यावृत्ति र लागूऔषधको महामारी बढेर गएको छ । यसकारण प्रहरीले यस्ता घटना हुने होटलहरुमा विशेष निगरानी बढाएको छ ।
काठमाडौं प्रहरी प्रमुख विश्वराज पोखरेलले अपराधिक घटनाक्रमलाई निस्तेज पार्छु भनेर लागेका छन् र नागरिकको सहयोग खोजिरहेका छन् ।
यी एसएसपी भन्छन्– राजधानीमा ७७ जिल्लाका मानिसको बसोबास छ । भारतलगायतका विदेशी हरुको आवतजावत, बसाइले गर्दा पनि अपराधिक समस्या समधान गर्न ठूलो चुनौती छ । यद्यपि आपराधिक गतिविधिलाई निर्मुल पार्न सबै पक्षसँग हातेमालो गरेर अगाडी बढिरहेको छु । पक्राउ परेका र पर्ने कुनै पनि अपराधिक घटनामा संलग्नलाई कारवाही हुन्छ, शंका गर्नु पर्दैन ।
एसएसपी पोखरेलले विशेषगरी काठमाडौंका होटेलहरु पछिल्लो समय आपराधिक गतिविधिका योजना बनाउने थलो बन्दैआएका बताउका छन् । देहव्यापार गर्नेहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिए पनि कानुनी कारवाही फितलो भएकाले कडा सजाय हुन नसकेकोमा उनी दु:खी छन् । उनले सुरक्षानीति प्रभावकारी बनाउनका लागि कानुनलाई समयानुसार परिमार्जन गर्न जरुरी ठानेका छन् ।